Qormo: Xamar Seedna Lama Xaq Dhowro Xarigna Lama Xirto - Somali Cable
Home/News/Qormo: Xamar Seedna Lama Xaq Dhowro Xarigna Lama Xirto
Qormo: Xamar Seedna Lama Xaq Dhowro Xarigna Lama Xirto
Abdi Aziz Really 2 weeks ago
W/Q Wariye Cabdi Casiis Cabdullaahi Maxamed Really
Nin aan saaxiib nahay oo dalka Dibadiisa ku maqnaa 22 Sano, kuna soo laabtay dalka ayaa waxa uu igu yiri isaga oo fajacsan “”Xamar seedna lama xaq dhowro, xariga badbaadadana lama Xirto.” waxaan ku iri “ii jilci.”.
Saaxiibkaan oo aan ka gaabsaday magaciisa ayaa waxa uu igu yiri “Waxaan kusoo laabtay dalka maalin kahor waaxana kazoo dagay garoonka diyaaradda Muqdisho oo waxaan doonayay in aan si kadis ah ugu tago eheladeyda waxaan ugu soo cararay dhowr taksiile oo waxaan ka doortay nin oday ah.
Markii aan soo raacay gaarigii taksiga ayaan maagay xiro xariga badbaadada gaariga lakiin waxaa ii muuqday in uusan u xirneyn xariga bad baadbadada xitaa wadaha gaariga markaan xirtay ayaan waxaan ku iri “Walaal xariga xiro waad ilowdee.” intuu igu qoslay ayuu waxa uu igu yiri “Xamar xarigna lama xirto ee cabsida iska daa”.
Isaga oo la yaaban ayaa waxa uu garigii lasoo laabtay wadada KM4 dhanka Shaqaalaha ayuuna soo aaday waxa uu ii sheegay in gaari waliba uu wadada ka marayay Halka uu doono mar kale ayuu waydiiyay wadihii gaariga waxa dhacaya waxa uuna ku yiri meeshaan seed deed lagama yaqaan.
Saaxiibkeey waxa uu farta ku hayay wadnaha waxaana u muuqanayay wado cariiri ah oo ay wada maragaan dhamaan gadiidka noocyadiisa waxa intaasi dheeraa in gawaarida qaar u soconayeen sida Maskii oo kale.
Markii uu soo dhamaaday socdaalkii ee uu yimid gurigiisa oo ku yaala degmadda Shibis ayaa waxa uu waydiiyay taksiilihii “war maxaad u mari wayday seedkaaga?” markaa ayuu ugu jawaabay “walaal Wadada waxaan ka maraa meesha furan ayadaaba iska xir xirane!”.
Ugu dambeyntii Ayaa waxaa uu sheekadda iigu soo gaba gabeeyay ninkaan aan saaxiibada nahay Saaxiib Xamar Seedna Lama Xaqdhowro Xarigna Lama Xirto.
Kenya oo ka digtay weerarada Al Shabaab
Maxaabiis lagu soo celiyay Muqdisho
Sawirro: Doorashadii ka dhacday Dhuusomareeb
Xarunta Baarlamaanka oo dib loo dhisayo
Mooshinka Jawaari oo saameeyay Guddoonka BFS